FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PUG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pug
Hector ny Pug miandry fitsaboana.
Alika Pug Sinoa
Alika kely, feno volo, toradroa ary matevina ny Pug. Ny loha boribory dia lehibe miaraka amina vava fohy sy mivolombola, toradroa. Ny molotra eo amin'ny takolaka dia heverina ho toerana tsara tarehy. Mihaona kely ny nify. Maizina ny maso lehibe sy lehibe misongadina. Ny sofina kely manify dia miendrika raozy na miendrika bokotra. Manana ketrona lehibe sy lalina ny tarehy. Ny rambony avo lenta dia miolikolika any aoriana ary misy curl roa sosona amin'ny peratra fampisehoana. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny palitao fohy dia malefaka, tsara ary malama. Ny lokon'ny palitao dia misy apricot, fawn, black and silver.
Ny Pug dia mazoto, miaraka amin'ny fihetsika falifaly. Animated, peppy ary be fanahy, izy io dia mahatoky, be fitiavana ary be fitiavana amin'ny fianakaviany. Milalao, mahavelona ary mirongatra, azo antoka fa hihomehy anao izany. Manam-pahaizana be, mora boka nefa tsy misy karazany amin'ny fampiofanana azy. Ireto alika ireto dia mety ho minia manao fanahy iniana raha mahatsapa izy ireo mahery saina noho ny olombelona manodidina azy ireo. Mahatsapa ny feon'ny feonao ny pugs, noho izany dia tsy ilaina ny fanasaziana mafy. Mila tompona izay izy ireo milamina, nefa mafy orina, matoky tena SY mifanaraka amin'ny lalàna . Ity alika ity dia sady tsy mahaliana no tsy mailo. Mpiambina tsara izy ireo, be fandavan-tena ary tsy yappers. Mifanaraka tsara amin'ny alika sy biby hafa ny pugs, ary tsy mandeha amin'ny fomba mety amin'ny ankizy sy ny mpitsidika. Alao antoka fa ho mpitarika ny fonosan'i Pug ianao. Ny pugs izay tsy manana mpitondra olombelona matanjaka dia mety hialona, ​​ary manomboka mampiseho fihetsika miambina, toy ny fanaka miambina , sakafo, kilalao na toerana hafa ao an-trano. Mitranga io fihetsika io rehefa avela handray azy ny alika. Ireo fihetsika ireo dia azo ahitsy rehefa manomboka mampiseho ny fitarihana sahaza azy ny tompony . Ny alika mahatsapa fa mila mitantana ny trano dia tsy faly toy ny alika mahafantatra fa mpanaraka ny olombelona izy ireo, satria manahirana tokoa ny alika mila mitazona ny 'olony' hilahatra.
Haavony: Lehilahy 12 - 14 santimetatra (30 - 36 cm) Vehivavy 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm)
Lanja: Lehilahy 13 - 20 pounds (6 - 9 kg) Vavy 13 - 18 pounds (6 - 8 kg)
Mora mahazo sery ny pug ary voan'ny tsindry mafana sy hatsiaka. Izy ireo dia mora tohina ary ny vavam-bava fohy dia manampy amin'ny olana ara-pisefoana lava, mahatonga ny Pug hirona sy hikorontana. (Mijaly noho ny rivotra mahantra ny pugs.) Mora voan'ny aretin-koditra. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Mora amin'ny Pug Dog Encephalitis (PDE), fivontosan'ny ati-doha mamely Pugs adolantsento matetika eo anelanelan'ny 2 sy 3. Ny antony tsy fantatra. Tsy izy ireo no mpora-mandeha mora indrindra. Matetika ny takelaka dia tsy maintsy misy fizarana cesarean noho ny haben'ny lohan'ny zanak'alika. Misy vintana Keratitis (mamontsina ny kornea) sy fery amin'ny kornea. Mora mitomany ny maso ary maso serizy . Aza be loatra mampinono Pug, satria hihinana bebe kokoa noho izay mahasoa azy ireo izy ireo, ka lasa matavy loatra ary manana fiainana fohy kokoa.
Ny Pug dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Tsy dia mihetsika intsony izy io ao an-trano ary handeha tsara raha tsy misy tokotany. Tsy mahazaka toetr'andro mafana na mangatsiaka ary tokony hotehirizina ao anaty trano amin'ny mari-pana milamina.
Alika mahery ny pugs misy tongony fohy sy mahitsy. Mila entina isan'andro izy ireo mandeha . Na dia mivoaka an-tongotra aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho olombelona. Ankafizin'izy ireo ny lalao mazoto ary ho salama tsara kokoa izy ireo raha omena fanatanjahan-tena tsy tapaka. Tandremo anefa sao mihoa-pefy, indrindra raha hitanao manomboka mihetsiketsika izy ireo.
12 ka hatramin'ny 15 taona eo ho eo.
Alika kely 2 -6 eo ho eo
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Aosory ary kosohy amin'ny borosy sy shampooing mafy rehefa tsy ilaina. Maina tsara aorian'ny fandroana mba tsy ho tony ny alika. Ny fonosana amin'ny tarehy dia tsy maintsy diovina matetika. Ity karazana ity dia mpitrandraka ambonimbony kokoa.
Ny Pug dia iray amin'ireo karazana tranainy fantatra ankehitriny, inoana fa nanomboka talohan'ny 400 talohan'i Kristy. Misy adihevitra momba ny niandohan'ny Pug. Manaiky ny ankamaroan'ny mpikaroka fa avy any Azia ny Pug, avy amin'ny olona tsy ampy olona Pekingese . Teoria iray hafa dia ny vokatry ny fiampitana kely Bulldog , raha ny hafa kosa mihevitra fa endrika kely amin'ny Mastiff frantsay (Dogue de Bordeaux) . Ilay mpanakanto Hogarth dia nanana Pug antsoina hoe 'Trump' izay matetika no asehony amin'ny sangan'asany. Nanjary malaza nandritra ny vanim-potoana Victoria tamin'ny taonjato faha-19 ny karazany. Ny monasiteran'ny Tibetana dia mitazona an'i Pugs ho biby fiompy. Nankany Japon sy Eoropa ilay karazany, ary tsy vitan'ny hoe biby fiompy andriana io fa alika ofisialin'ny House of Orange any Holland. Manana an'i Pugs i Prince William II. Ny alika iray manokana dia voalaza fa namonjy ny ainy tamin'ny taona 1572 tao Hermingny, rehefa nibolisatra ilay alika nanatona ny Espaniola nampandre azy ny fisian'izy ireo. Tany Frantsa, ny vadin'i Napoleon Josephine dia nanana Pug antsoina hoe Fortune. Tamin'ny alin'ny mariazin'izy ireo, rehefa nandà tsy hamela ny alika hatory eo am-pandriana i Napoleon dia nilaza taminy i Josephine hoe: 'Raha tsy matory eo am-pandriantsika ny Pug dia tsy izaho koa!' Rehefa nalefa tany am-ponja i Josephine dia nampiasainy ilay alika kely handefasana hafatra miafina amin'ny vadiny amin'ny alàlan'ny fametrahana taratasy kely eo ambanin'ny vozon'akanjo Pug. Tamin'ny taona 1860, rehefa lasan'ny Anglisy ny lapan'ny mpanjaka emperora sinoa dia nahita Pug sy Pekingese maromaro izy ireo, ary ireo alika dia naverina tany Angletera niaraka tamin'izy ireo. Ny AKC dia nahafantatra ny Pug tamin'ny taona 1885. Ny talenta Pug sasany dia misy: watchdog sy fanaovana fikafika.
Mastiff, kilalao AKC
Roxy the Pug mainty amin'ny 7 taona
Max the Pug amin'ny faha-8 taonany
Dexter the Pug amin'ny 2 taona
'Ity ny sarin'i Pugs efatra. My Pugs: Duffer (3), Zoe '(2), Abby (2) ary Frankie (1) dia tena tia fakan-tsary. Izy ireo dia hanao pose ho ahy amin'ny fotoana rehetra tadiaviko. Duffer sy Zoe ', izy roa ao aoriana, dia ray aman-drenin'i Frankie ... Abby no Pug mainty. Matanjaka be izy ireo, milalao ary be fitiavana. Mihira sy mandihy i Duffer ary tiany daholo ny rano. '
'Ity no tovovavy malalako Shelby aseho eto amin'ny 10 taona. Nifidy Pug tokoa izahay taorian'ny nanaovanay ny Dog Breed Quiz tao amin'ity tranonkala ity 10 taona lasa izay ary nivadika ho fanampin-javatra mahafinaritra ho an'ny fianakaviana izy. Nasainay naloto toy ny alika kely izy ary nanana toetra malemy paika foana, tia alika hafa , saka sy ny olona. Hatrany am-piandohana dia nampiofana azy aho ary, toy izay hiantsoantso, dia nisafidy ny hampiasa tavoahangin-drano aho hanomezana azy squirt haingana fony izy alika kely ary manaikitra ny olon-drehetra (mitovy amin'ny nibble mahafatifaty, saingy tsy mila ratsy aho fahazarana miforona!). Hainy ny mipetraka, mihozongozona, mandeha matory ary mahalala teny maro toy ny hoe 'avia,' ' mandeha mitsangatsangana / mandeha 'sy ny tiany:' mitsabo. ' Ny zavatra iray izay nahagaga ahy dia ny habetsaky ny vola navoakany - mandavantaona sy tsy miova. Raha vantany vao tsapako dia nampiofaniko izy mba tsy hitsambikina amin'ny fanaka (ny tavoahangin-drano dia niasa tsara ho an'izany koa!) Ary tena manalavitra akanjo toy ny volon'ondry mainty isika izay mampiseho ny volon'ondry fotsy rehetra ary tsy misy fantsom-bozaka toa esorina! '
'Ity no mpikomy aseho eto amin'ny 1 taona. Hafa kely noho ny volondavenona sy Pug mainty izy satria 'stripe' setroka eo an-damosiny sy ny vavony. Izy no manafana ny lapako kelikely, fa aza avela hanodinkodina anao ny habeny, afaka mitazona ny azy amin'ny alika lehibe izy (mitaiza aho Pit Bulls ) ary matetika izy no mpitondra raha ny momba azy ireo. Vao nahazo 'rahavavy' 6 herinandro, a Doxie antsoina hoe Maya, ary miaro azy amin'ny saka . Tiako be izy! Nijery ilay Dog Whisperer aho ary nampiasa ny toro-hevitra vitsivitsy nianarako tamin'i Cesar tamin'ny fampiofanana ny zandriko lahy ho tonga lehilahy tsara lavorary. Mikasa ny hampiasa ny toro-hevitra vitsivitsy nianarako hampiofanana ny Doxie Maya koa aho! '
Mikomy ny alika Pug ary mainty amin'ny 9 herinandro
Ny rambony olioly Pug
Fandroahana ilay Pug mainty
Buzo the Pug puppy amin'ny 2 volana
Jereo ohatra hafa momba ny Pug
Sary Pug 1
Sary Pug 2
Sary Pug 3
Sary Pug 4
Sary Pug 5
Sary Pug 6
Alika Pug: sary an-tsokosoko voaangona
Alika kely rottweiler 5 volana
dachshund sy yorkie afangaro alika kely
laboratoara basety afangaroy alika kely amidy
papillon shih tzu mifangaro amidy
mixer pointer labrador mixer alemana
alika kely bulldog basset hound afangaro alika kely hamidy